Blaogy fasika mando sy maina any Sina ho an'ireo mpanamboatra sy mpamatsy poloney tsara. Xieyanshi
Ny abrasives dia azo ampiasaina amin'ny asa fanamboarana fiara, fanodinana hazo na panneaux.
Voam-boaloboka mba hanomezana vokatra haingana amin'ny sanding.
Rafitra fisokafana misokatra, ampitomboy ny faharetana ary koa ny fisorohana ny fanakanana.
Tena mety amin'ny sanding amin'ny zoro tànana, faritra plastika miolakolaka na fanaka.
XYS Sponjy Sanding Sandpaper
Ny baraon'ny sponjy grIndIng, fantatra ihany koa amin'ny hoe sponjy sandblock, blockshIng grlndIng block, resln grlndIng block, abraslve grIndIng block, plastlc grindIng block, sns., Mifototra amin'ny spaonjy, ary ny ls mifono wlth abraslve sandon ny spaonjy, klnd of pollshInglallalandy.
Izy io dia tena azo volena amin'ny grindIng ambonimbony, ary manondraka rano izy ary mitazona rano mandritra ny lava. Izy io dia afaka misolo ny taratasy sand-drano. Ny sponjy grIndIng blocks dia azo atao lnto varlous endrika sy speclflcatlons.
Softback Sanding Sponge fasika dia faritra sarotra aleha amin'ny fiara, kamio ary van toa ny eo am-baravaran-jiro, ny vavahady, ny varavarana ary ny toerana hafa. Ny lamosina malefaka sy malefaka dia mifanaraka amin'ny mombamomba na endrika rehetra amin'ny fiara. Ireo sponjy ireo dia mifono alim-bary alim-by maharitra aluminium.
Mora ny mandefa sanding sarotra
Rehefa mila fasika amin'ny toerana mahasarika tratrarina ianao, na mila fasika fanamamiana mombamomba anao manokana dia safidio ny Softback Sanding Sponge ho an'ny fahaizany mampifanaraka ny endriny rehetra na mahatratra toerana sarotra. Ny fanohanan'ny foam malefaka dia malefaka kokoa noho ny taratasy sandam-baravarana mahazatra. Mba hidirana amin'ny toerana tery dia natao somary manify ilay tohana kapa raha ampitahaina amin'ny spaonjy fasika hafa. Ampiasao ireo sponjy ireo ho an'ny fampiharana sanding-tanana izay ilainao ny fametrahana mazava tsara kokoa sy ny antsipiriany kokoa noho izay azo tratrarina amin'ny alàlan'ny famafazana milina.
Fitaovana abrasives: Oxygène aluminium
Fitaovana ifotony: ny taratasy tasy mifatotra amin'ny spaonjy
Adhesive: resina Phenolika
Ny spaonjy dia tena malefaka sy malefaka, mety amin'ny famolavolana ny haben'ny profil ary ny pitsopitsony tsy mora, sarotra azo tratrarina amin'ny tanana. Ilaina indrindra izany eo amin'ny sehatry ny fiara sy ny sampana fanamboarana fiara. Ny fotony dia mihatra tsindry izay mampihena ny risika ny sanding namaky ny tany.
Manaraka: Takelaka fantsom-pasika ho an'ny Orbital Sander-A720T tsy mitongilana